Kaominina Mahajanga : Naongan’ny mpanolo-tsaina ny ben’ny tanàna Mokthar Salim -
AccueilRaharaham-pirenenaKaominina Mahajanga : Naongan’ny mpanolo-tsaina ny ben’ny tanàna Mokthar Salim
Nipoaka ny takotra. Ela ny ela ka tonga amin’ny tsotsori-mamba hisarahana ny ben’ny tanànan’i Mahajanga am-perin’asa, Mokthar Salim Andriantomanga, avy amin’ny antoko Mapar, sy ireo mpanolo-tsaina monisipaly.
Raha ny vaovao mantsy, nitroatra ireo mpanolo-tsaina monisipaly amin’ny tsy fahafehezan’ity ben’ny tanàna avy amin’ny antoko Mapar ity ny asany. Teo ihany koa ny fanambarany nanoloana ny Filoham-pirenena tamin’ny fandraisany fitenenana fa tokony ho ny ben’ny tanàna ihany no manendry ireo mpanolo-tsaina eo anivon’ny kaominina. Noho izay indrindra, nampiantso fivoriana ireo mpanolo-tsaina ny talata 28 Febroary teo, ary nanasana ny ben’ny tanàna, Mokthar Salim Andriantomanga izany saingy, tsy nipoitra anefa izy ary tsy nandefa fialan-tsiny tamin’io tsy fahatongavany nanatrika ilay fivoriana io akory ny tenany tamin’izany. Izay indrindra anefa no tena anisan’ny nampitroatra ireo mpanolo-tsaina ka nitarika tamin’ny fifidianana fanonganana ny ben’ny tanàna. Araka izany, rehefa nandeha ny fifidianana amin’ny fampiatoana amin’ny asany an’ingahy Mokthar Salim Andriantomanga, vato iray no nampitazona azy hatreto, satria vato valo no nanohitra ny fanonganana ary fito kosa no nankasitraka ny fanonganana.
Raha ny fanazavana mantsy, teboka sivy no nampiatoan’ireo mpanolo-tsaina monisipaly amin’ny asany ity ben’ny tanàna ity. Anisany amin’izany ireo voalaza etsy ambony ireo, miampy ny fandraisany fanapahan-kevitra irery tsy mahazo fankatoavan’ny mpanolo-tsaina tamin’ny fananganana sy fanamboarana toerana famonoan’omby, ary indrindra indrindra ny tsy fanehoana ny teti-bolam-piasana voalohan’ny kaominina, sns.
Hatreto, raha ny vaovao voaray, noentin’ny filohan’ny mpanolo-tsaina monisipaly niakatra aty Antananarivo ity raharaha ity. Ho fantatra amin’ny zoma 3 Marsa izao kosa ny ho avin’i Mokthar Salim Andriantomanga.